को’रोना संक्रमण बढेपछि पुनः दुई साता कडा लकडाउन हुने – Sandesh Press
July 30, 2021 250
रुपन्देही । को’रोना संक्रमण बढेपछि अर्घाखाँचीमा पुनः दुई साता लकडाउन हुने भएको छ । दोस्रो चरणको संक्रमण दर उकालो लागेपछि बैशाख २० गतेबाट शुरु भएको लकडाउन असार १४ गतेसम्म कायम थियो ।
Prevअझै ठिक भइनन् शोभा दर्जी, अस्पतालमा बाँ धे र उपचार हुँदै! किन भएन यी चार महिलालाई कारवाही?
Nextआज झन् उकालो लाग्यो कोरोना संक्रमण, थप २७ ले ज्यान गुमाए
सलमानको कन्सर्टमा नाच्न यी नायिका भइन फाइनल